5 Best Cabitaano Local Si Cab Oo Isku day In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Cabitaano Local Si Cab Oo Isku day In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 29/12/2019)
Europe waa goob kulan oo cajiib ah oo dad badan oo dhaqamada kala duwan - iyo caadooyinka, Kuliyadda. oo quruun waluba waxay leedahay aqoonsi oo kala duwan u gaar ah, oo barbar dhac kooxda martida ah xaq u galay taariikhda iyo wax kasta oo kale waxay bixisaa. Iyo dalal qaar ka mid ah, in sidoo kale ka dhigan cabitaanka flavorful!
Kuwa idinka mid ah oo u safreysa Dhectuuro aad dhanxanegga oo ay leeyihiin dadka deegaanka qaar ka mid xiiso leh ansixiyey raaxaysan doonaa booqanaya dalalkaas. Halkan waxaa noo top 5 cabitaanka ugu fiican ee deegaanka si ay cabbaan, oo ay isku dayaan in Europe:
1. Best Cabitaano Local In Italy: Limoncello
Limoncello waa been abuurtay Talyaani cajiib ah in aad ka heli karto dhamaan this dalka u qurux badan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in ay isku dayaan this khamriga liin light at its ugu fiican, madaxa si Amalfi. Waxaa, on Quruxdii Amalfi Coast, inay sameeyaan limoncello ka liin ugu wanaagsan oo dhan iyo Italy. recipe asalka ah ka dhigaysa dhadhan cabitaan this sida liinta ah leedahay beduliyum waa wax yar oo kaliya macaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si tartiib tartiib ah oo si taxadir leh SIP, maxaa yeelay, ay xoog aad qaadi karto by yaab.
2. Bordeaux Best Local Khamrigu - France
Waayo, lover oo khamri ah, mid ka mid ah cabitaanka ugu fiican ee maxaliga ah si ay isugu dayaan in Europe sida xaqiiqada ah waxay noqon lahayd khamri Bordeaux a. Inkasta oo waa caan Faransiis dhoofinta, waxa hubaal ah waa waayo-aragnimo ah muunad khamri this fiican halka Bordeaux. safar khamri A waa si qumman oo si ay u sahamiyaan gobolka iyo khamri raagay oo ay. Waa maxay more, waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan samaynta khamri, chateaus qurux badan, iyo microclimates.
Haddii aad ku jirto London inta lagu jiro xagaaga, aad si fudud kama tegi karo iyadoo aan sampling Pimms Cup. Waxay ahayd James Pimm kuwa cabniinka ee 1800-bartamihii abuurtay, oo isna wuxuu u adeegay in koob weyn in wixii uu magiciisa deymin. Waa cabdo in isku daraa kuul xoorsan oo Pimms No. 1, iyo sidoo kale xaleef miro iyo saasuu geedcanab, reexaanta. Absolutely delicious, oo fiican ee ku riyaaqayaa on maalintii xagaaga khafiif ah oo ay goob beer, Pimms Cup doono aad soo jiidashada.
4. Best Cabitaano Local In Germany: schnapps
In Germany, Schnaps waa erey dallad ah cabitaan khamri xoogan oo yeelan karaan noocyo kala duwan oo dhadhan. Tusaale ahaan, aad karto Schnaps Maalmihii ama mid ka mid ah geedo yaryar oo ku salaysan. Kasta oo ka mid ah aad doorato, waxaa laguu isagoo doonaa cabitaan caan maxaliga ah in aan xusno doonaa ruuxa Germany. dadka deegaanka ayaa jecel isagoo Schnaps ka dib markii ballaaran ah, cuntada culus, halkaas oo ay xoog caawisaa dheefshiidka. Sidaas marka aad ku sugan tahay Germany, si xor ah u faysteeyaan oo cab ilaa!
Belgium uu macnihiisu yahay biir, laga yaabee in ka sii badan Germany waa. Laakiin oo dhan deegaanka cajiib ah qamri Belgian, waxaase jira mid off aad garaacdaan doonaa cagahaaga. qamri Abbey, sidoo kale loo yaqaan Trappists, aad ayaa loo jecel ee Belgium, laakiin biir Abbey Westvleteren waa mid ka mid ah naadir. Si aad u hesho, aad u baahan tahay si ay u leenahay ka Abbey ah 60 maalmood ka hor wakhtiga. Si kastaba ha ahaatee, waa sidoo qiimihiisu dhibaato.
Ready in ay ku raaxaystaan ​​cabitaanka ugu fiican ee degaanka Europe ku siin karaan? Boorso bacaha aad, sameeyo qorshe aad, iyo madaxa hay'adda Save the Tareenku Ballansan Your Tigidhada in Tareenku si ay u arkaan Europe iftiinka dhan kala duwan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Cabitaano Local in Isku day in Europe” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/ugu wanaagsan ee degaanka-cabitaanka-Yurub/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#cabitaanka #traveleurope Italy London travelbelgium travelfrance travelgermany traveltips